Shina namboarina namboarina rindrina Spiral - Mpanamboatra - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Home >Products >Fitaovana fanaka plastika>Fitaovana rindrin'ny spiraly
13 * 42MM fantsona fanitarana fiara manokana ho an'ny tabilao gypsum
10 * 32MM fantsona fanitarana fiara manokana ho an'ny tabilao gypsum
1. Manana ny ozinanao manokana ianao? Eny, mpanamboatra ao Shina izahay mandritra ny 10 taona mahery. Ny orinasa misy anay dia any amin'ny faritanin'i Guangdong.2. Ahoana no ahafahako mitsidika ny orinasa misy anao? Pls ampahafantaro anay anay mialoha raha mikasa ny hitsidika ianao. Azonay atao ny manoro anao ny lalana na mandray anao eny amin'ny gara na amin'ny seranam-piara-manidina.3. Manome santionany maimaimpoana ve ianao?
15 * 32MM fantsona fanitarana fiara manokana ho an'ny tabilao gypsum